तथ्यांंकमा महिला: कहाँका अगाडि कहाँका पछाडि ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
तथ्यांंकमा महिला: कहाँका अगाडि कहाँका पछाडि ?
भाद्र २६, २०७५ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — मुलुकको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । धेरैलाई चासो हुन सक्छ, महिला र पुरुषको असन्तुलन सबभन्दा धेरै कुन प्रदेशमा छ ?
तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशको कुल जनसंख्यामा महिला ५४.६ प्रतिशत छन् । यहाँ २४ लाख ३ हजार ७ सय ५७ महिलाको संख्या छ । महिलाको जनसंख्या सबभन्दा बढी भएको प्रदेश २ नम्बर हो । उक्त प्रदेशमा महिलाको संख्या २६ लाख ८६ हजार ४ सय ७ रहेको छ ।
प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा महिला ४९.७ प्रतिशत छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको वुमन इन नेपाल नामक प्रतिवेदनमा नेपालमा महिलाको सामाजिक, आर्थिक अवस्था जनाउने तथ्यांक समाविष्ट छ । यो प्रतिवेदनले पहिलोपटक महिलाको अवस्था र सामाजिक सूचकलाई प्रदेशस्तरीय रूपमा केलाएको छ ।
विभागले सन् २०११ मा गरेको जनगणना, विभिन्न मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन निकालेको हो । उक्त तथ्यांकअनुसार प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहमा विद्यालयमा उपस्थित हुने छात्राको संख्या सबैभन्दा उच्च गण्डकी प्रदेशमा छ ।
यहाँका ८९.५ प्रतिशत छात्रा विद्यालयमा उपस्थित हुने गरेको देखिन्छ । छात्राको विद्यालयमा उपस्थिति प्रदेश २ मा सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश २ का ६२.४ प्रतिशत छात्रा मात्रै विद्यालयमा उपस्थित देखिन्छन् ।
तथ्यांकले प्राथमिक तहको कक्षामा उपस्थित हुन योग्य २३ प्रतिशत छात्रा र २२.८ प्रतिशत छात्र विद्यालय बाहिर रहेको देखाउँछ । प्रदेश ५ का २५.४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका २०.७ प्रतिशत, प्रदेश १ का १७.२ प्रतिशत, प्रदेश ३ र कर्णाली प्रदेशका १४.८ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा कम अर्थात् १०.५ प्रतिशत छात्रा प्राथमिक तहको शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् ।
तथ्यांकले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको आमसञ्चारको पहुँचलाई पनि बाहिर ल्याएको छ । नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१४ लाई आधार मानिएको उक्त तथ्यांकले औसतमा नेपाली महिलाको सबैभन्दा धेरै पहुँच टेलिभिजनमा रहेको देखाएको छ भने सबैभन्दा कम पहुँच पत्रिकामा रहेको देखाएको छ । सबैभन्दा धेरै अर्थात् प्रदेश ३ का महिला पत्रिका पढ्ने सन्दर्भमा अगाडि छन् ।
३ नम्बर प्रदेशका ३९.१ प्रतिशत महिला सातामा कम्तीमा एक दिन भए पनि पत्रिका पढ्छन् । आमसञ्चारमा सबैभन्दा कमजोर पहुँच कर्णाली प्रदेशका महिलामा रहेको छ । यस प्रदेशमा जम्मा ५ प्रतिशत महिला मात्रै पत्रिकामा पहुँच रहेको छ भने २८.५ प्रतिशत महिलाको रेडियोमा पहुँच देखिन्छ । सबै प्रदेशभन्दा थोरै अर्थात् १२.७ प्रतिशत महिलाको टीभीमा पहुँच रहेको छ भने सबै प्रदेशभन्दा कम अर्थात् २.५ प्रतिशत महिलाको मात्रै तीनै थरी सञ्चार माध्यममा पहुँच रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशकै जस्तो कमजोर अवस्था प्रदेश २ का महिलाको पनि देखिन्छ । यस प्रदेशका जम्मा ५.७ प्रतिशत महिलाले साताको एकपटक पत्रिका पढेको देखिन्छ भने २७.७ प्रतिशत महिलाले रेडियो सुन्ने र ४९.६ प्रतिशत महिलाले टेलिभिजन हेर्ने गरेको देखिन्छ । यो प्रदेशका जम्मा ४.१ प्रतिशत महिलाको मात्रै तीनै थरी सञ्चारमा पहुँच रहेको छ । तीनै थरी सञ्चार माध्यमको सबैभन्दा कम पहुँच भने कर्णाली प्रदेशका महिलामा रहेको छ । उक्त प्रदेशमा जम्मा २.५ प्रतिशत महिलाको मात्रै तीनै थरी सञ्चार साधनमा पहुँच छ ।
कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगमा पनि समग्रमा नेपाली महिलाको कमजोर पहुँच रहेको छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका कुल २१.७ प्रतिशत महिला कम्प्युटर र कुल १९.६ प्रतिशत महिला इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै प्रदेश ३ का ४४.९ प्रतिशत महिलाको कम्प्युटरमा पहुँच रहेको छ भने सबभन्दा कम पहुँच अर्थात् ६.१ प्रतिशत प्रदेश ६ का महिलाको छ ।
प्रदेश २ का जम्मा ९.६ प्रतिशत महिलाको कम्प्युटरमा पहुँच देखिन्छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका ६.८ प्रतिशत महिलाको इन्टरनेटमा पहुँच रहेको देखिन्छ भने प्रदेश २ का ८.२ प्रतिशत महिलाको इन्टरनेटमा पहुँच देखिन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०९:१७
जंगबहादुर जुगको जनगणना
भाद्र २३, २०७५ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — नेपालको पहिलो जनगणना कुन थियो ? सरकारी निकाय तथ्यांक विभाग भन्छ— संवत् १९६८ मा पहिलो गणना भएको हो । तर, सरकारी अड्डाले दाबी गर्ने गणनाभन्दा ५८ वर्षअघि तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुरले काठमाडौं उपत्यका र आसपासमा व्यवस्थित जनगणना गराएका छन् । यो इतिहासको प्रामाणिक लिखतको वृत्तान्त आफैंमा कुतूहललाग्दो छ ।
इतिहासको खलपात्रका रूपमा उभ्याइएका राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले आफ्नो शासनकालमा गरेको बेलायत भ्रमण, रासलीलाका अनेकन प्रसंग, भोग–विलासी कहानी र आफ्नो शासन टिकाउन गरेका अनेकन हर्कतको इतिहास धेरैका निम्ति नौलो होइन । तर, यिनै राणा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शासनकालमा व्यवस्थित जनगणनाको अभ्यास गरेका थिए भन्ने तथ्य भने धेरैका निम्ति नौलो हुन सक्छ ।
त्यसो त जनगणनाको काम गर्ने मुख्य निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग संवत् १९६८ मा भएको जनगणनाको प्रमाण मात्रै रहेको छ । अर्थात्, यसअघि जनगणना भए/नभएको बारे तथ्यांक विभाग आफैंमा बेखबर छ । यसैका आधारमा भन्न सकिन्छ— इतिहासप्रति बेखबर र अमूर्त ‘समृद्धि’ प्रति मात्रै चासो राख्ने सरकारी प्रशासनका निम्ति जंगबहादुरले गरेको जनगणनाबारे थाहै नपाएजस्तो गरी आँखा चिम्लनु लज्जाबोधको उदाहरण हो ।
तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा संवत् १९६८ यता ११ वटा जनगणना सम्पन्न भएका छन् । विभागले संवत् १९९७ मा संचालन गरेको गणना ‘सामान्य व्यक्तिको संख्या गन्ने काम’ मा सीमित थियो । २००९–११ पछि मात्रै आधुनिक जनगणना सुरु भएको तथ्य विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
खोजबिन क्रममा कान्तिपुरले भने आजभन्दा १ सय ६५ वर्षपहिले अर्थात् विसं १९१०, १९११ र १९१३ मा जंगबहादुरले गराएको हस्तलिखित जनगणनाको मूल प्रति फेला पारेको छ । नेपाली कागजमा लेखिएको उक्त गणनाको तीन अभिलेखमध्ये एकमा कप्तान सतराम खत्री र सुवेदार जगतबहादुर खत्रीले प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख छ । सतराम तिनै व्यक्ति हुनुपर्छ जसले नेपाल सरकार र तत्कालीन भोट सरकारबीच विसं १९१० मा सम्पन्न सन्धिपत्रमा नेपाली भारदारको रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जंगबहादुरका छोरा पदमजंग राणाले लेखेको जंगबहादुर राणाको जीवनीमा आफ्ना बुबाले आफ्नो शासनकालमा जनगणना गराएको तथ्य उल्लेख छ । यी तथ्यहरूले जंगबहादुरको शासनकालमा जनगणना गरिएको तथ्य पुष्टि हुन्छ । यस लेखोटबारे एक समय तथ्यांक विभाग, योजना आयोग र पुरातत्त्व विभाग जानकार रहेको देखिन्छ । तर, उनीहरूले आँखा चिम्लनाले ऐतिहासिक नेपाली समाजको बारे समेटिएका कैयन तथ्यबाट नेपाली समाज बेखबर रहयो ।
६ सय पृष्ठको तीन फरक–फरक लिखोटमा भादगाउँ भनेर पनि चिनिने भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र र काठमाडौंलगायत तत्कालीन ३३ जिल्लाको जनसंख्याको विवरण समेटिएको छ । पाटन र भक्तपुरको जनगणनामा घरको प्रकार, परिवार संख्या, लोग्ने र स्वास्नीको विवरण, बारी र पातालको संख्या गणना गरिएको छ । परिवारका घरमुलीको नामसमेत उल्लेख गएिको गणनामा बजार व्यवस्था बुझाउने तथ्यांक, देवाल, पाटी सत्तल, इनार र पोखरीको विवरण पनि समेटिएको छ ।
सहर भादगाउँका घर जहानको किताब शीर्षकको लेखोट विसं १९१० मा जनगणना गरेर तयार पारिएको देखिन्छ । यसमा भक्तपुर दरबार क्षेत्रका विभिन्न २४ टोलको मिहिन विवरण छ । एक सय ६५ वर्षअघि उक्त क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक हैसियत कस्तो थियो ? धार्मिक स्थल, पार्टी, पौवा र पोखरीको अवस्था कस्तो थियो ? घरहरूको संरचना कस्तो थियो भन्नेजस्ता तथ्यको दुरुस्त विवरण यो लेखोटमा उत्रिएको छ ।
लिखोटमा भक्तपुर दरबार क्षेत्रका २४ टोलको क्रमश: भार्वाचो, ईतांछे, लाकुटोल, लाको लांछे, खौमा, तेंखाचो, तुलाछे, घया, मलाछे, यालाछे, तौमढी, चोंछे, बोलाछें, ईनाचो, क्वाडन्डौं, गोलमढी, तचापाल, याछें, जेंला, चासुखेल, थालाछें, भांछे, गछें, तौलोछें टोलमा बस्नेहरूको नामसहितको विवरण छ । नेवारी भाषाको नामहरू भएको र जनगणक पर्वते मूलको भएकाले पनि केही स्थानको नाममा सामान्य त्रुटि देखिन्छ ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, साँच्चै डेढ सय वर्षअघिको भादगाउँ कस्तो थियो होला ? भादगाउँमा महिलाको जनसंख्या १४ हजार २ सय ७९ र पुरुषको जनसंख्या १४ हजार ९ सय ४४ रहेको छ । अर्थात् कुल जनसंख्यामा महिलाको जनसंख्या पुरुषको तुलनामा ६ सय ६५ ले बढी रहेको देखिन्छ । डेढ शताब्दीअघिदेखि नै नेपाली समाजमा ‘लैंगिक अनुपातको असन्तुलन प्रवृत्ति’ कायमैं रहेको देखिन्छ । पछिल्लो २०५८ को जनगणनामा प्रतिसय महिलामा पुरुषको जनसंख्या ९४.१६ रहेको छ । जबकि यही अनुपात २००९–११ को जनगणनामा प्रतिसय महिलामा पुरुषको अनुपात ९६.८ रहेको थियो ।
इतिहास र संस्कृतिका अध्येता पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठका अनुसार १२ औं शताब्दी पुरानो सभ्यता रहेको भक्तपुर तीन सय वर्षसम्म लिच्छविकालको राजधानी रहेको थियो । आजभन्दा २०१२ वर्षअघि प्रधानमन्त्री सरहको मुख्तियारी पद सम्हालेका भीमसेन थापाले आफ्नो शासनकालमा सम्पादन गरेर प्रकाशित गरिएको भनिएको ‘भाषा वंशावली’ मा तत्कालीन भादगाउँको जनसंख्या १२ हजार रहेको देखिन्छ । पुरुषोत्तमले भीमसेनको शासनकालमा १२ हजार रहेको जनसंख्या जंगबहादुरको पालामा २९ हजार २ सय २३ हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । उनले भने, ‘लेखोटमा उल्लिखित तथ्यबाट यसको प्रामाणिकतामा शंका गर्नुपर्ने देखिन्न ।’ उनका अनुसार त्यतिबेलाका शासक नै सहरबाहिर घर बनाउन हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले पनि जनसंख्या यिनै २४ टोलभित्र थुप्रिएको हुन सक्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
भक्तपुरको तचपालमा जन्मे–हुर्केका सम्पदाकर्मी रवीन्द्र पुरीका बुझाइमा जंगबहादुरले गराएको जनगणना इतिहासकार, संस्कृति र सम्पदाकर्मी वा समाजशास्त्रका विद्यार्थी सबैलाई अध्ययन गर्ने ‘खजाना’ हो । आफ्नै टोलका पिता–पुर्खाको नाम देखेर रौसिएका पुरीले भने, ‘अहिलेसम्म सम्पदा, जनसंख्याको विस्तृत विवरण भएको यो नै सबैभन्दा पुरानो र प्रामाणिक इतिहास हो ।’
४ हजार २ सय ४१ घर संख्या रहेको भादगाउँमा त्यतिबेला झिंगटी र परालको छाना भएका घर मात्रै रहेको देखिन्छ । लेखोटमा ४ हजार ६ सय १३ झिंगटी घर र ६ सय २८ परालको छाना घर रहेको देखिन्छ । जबकि २०६८ को पछिल्लो जनगणनाले जंगबहादुरले जनगणना गरेको २४ टोलसमेत समेटिएको भक्तपुर नगरपालिकाका १७ हजार ६ सय ९३ घरमध्ये परालको छाना भएका घर ९१ रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, ४० घरमा मात्रै झिंगटीको छाना रहेको र ८ हजार एक सय ९० घरमा ढलान र ८ हजार ५५ घरमा जस्तापाता छाना रहेको देखाउँछ । यसैका आधारमा भन्न सकिन्छ— पराल र झिंगटीको छाना भएको मध्यपुर थिमी बिस्तारै ‘एकादेशको देश’ बन्दै छ ।
लिखोटमा मध्यपुर थिमीमा नयाँ र पुराना गरी ३ सय ९७ पसल रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले थिमीको उतिबेलाको अर्थतन्त्रको मुहार चिन्न सघाउँछ । लेनदेन र ऐंचोपैंचो प्रणालीभन्दा पनि बजार प्रणालीलाई थिमीले स्विकारिसकेको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ सय ६४ वटा खिच्रीमिच्रीको पसल रहेको भक्तपुरमा भाडा पसल मात्रै ५६ वटा रहेको देखिन्छ । त्यतिबेलाको थिमीमा कपासपसलको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । लेखोटमा भनिएको छ—थिमीमा मात्रै ७६ वटा त कपासकै पसल रहेका थिए । त्यस्तै फौबन्जार पसल ३० वटा, हलुवाईपसल ३० वटा, ज्यासल ३ वटा र पानपसल ३ वटा देखिन्छ । नेवार बाहुल्य रहको थिमीमा त्यतिबेलै ३ वटा पानपसल रहेको देखिन्छ । मल्ल राजाहरूकै पालामा भादगाउँमा मैथिल ब्राह्मण झाहरूको बसोबास रहेका कारण पनि पान पसलको उपस्थिति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भादगाउँका स्थानीय झाहरूका अनुसार तीन सय वर्ष अघितिर तत्कालीन सिम्रौनगढ राज्यबाट झाहरू भादगाउँ आएको देखिन्छ । उतिबेलाको थिमीले देशबाहिरका मानिसलाई पनि व्यापार गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ । थिमीमा मात्रै ६ वटा त कश्मीरी पसल रहेको देखिन्छ ।
धार्मिक मठ मन्दिरमा पनि थिमी सम्पन्न देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा मात्रै २ सय २२ वटा देवताको स्थल रहेको विवरण लेखोटमा छ । सुब्बा राममार्फत जीर्णोद्धार गरिएका देवल भण्डार घरको संख्या सात रहेको उल्लेख गरे पनि ‘सुब्बा राम को थिए ?’ भन्ने खुलाइएको छैन ।
धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको केन्द्र मानिने पाटन एक सय ६५ वर्षअघि कस्तो थियो होला ? विस १९१३ मा तयार पारिएको ‘सहर पाटनको घर जहानको किताब’ शीर्षक लेखोटमा तत्कालीन पाटनभित्रका २५ टोलको जनसांख्यिक विवरण समेटिएको छ । ईखांचे, कोंटी, कोबाहाल, भेलाछें, च्यासल, खर्पिछे, थेकछें, यनमुगल, चंकी, स्वकबहाल, दुपाट, न्हेफलें, घलायपाट, सौगल, मंगल, हौगल, टंगल, न्हागल, ईखालखु, थवुं, बला, गावाहाल, दथुढोल, नकवहिल, पुलचोक नकको जनसंख्या, घर विवरण, व्यापार–व्यवसाय अवस्था र धार्मिक र सांस्कृतिक स्थल वर्णन यो लिखोटमा उल्लिखित छ । विसं १९१० असार १ देखि १९११ साउनसम्ममा यी टोलमा नयाँ बनेका संरचनाको विवरण पनि यसमा समेटिएको छ । एक वर्षको यो अवधिमा पाटनमा २३१ वटा नयाँ घर बनेको र जसमा १ सय ५५ वटा झिंगटी घर बनेको देखिन्छ ।
लिखोटमा २८ हजार ७ सय १४ जनसंख्या रहेको तत्कालीन पाटनमा ५ हजार ६ सय ९७ घर रहेकामा ४ हजार ७ सय ९७ घर झिंगटीको छाना भएका र परालको छाना भएका घर जम्मा ८ सय ४० रहेको देखाउँछ ।
तत्कालीन पाटनको बजार व्यवस्था कस्तो थियो भन्ने जनाउने सूचकहरू पनि यसमा समेटिएका छन् । त्यतिबेला पाटनमा जम्मा जम्मी ४ सय ३८ वटा पसल रहेको देखिन्छ । एक सय ८४ वटा खिच्रीमिच्री पसल, ३२ वटा कपासपसल, ४३ वटा कपडापसल, दूधको पसल चारवटा, दहीपसल १७ वटा, लहटिया चुरापसल २ वटा साबुनपसल ४ वटा, तमाखुपसल ४ वटा, हलवाईपसल ९ वटा रहेको विवरण छ । लिखोटमा पाटनमा ३७ वटा रक्सीपसल सञ्चालनमा रहेको तथ्य समेटिएको छ । पाटनमै त्यतिबेला नै उदारबक्स मिया, महावीर बक्स मियालगायतमा कश्मीरी ‘मुसलवान’ को २० वटा पसल पाटनमा रहेको देखिन्छ । जसमा कश्मीरी मुसलवानको ५ वटा मासुपसल रहेको देखिन्छ ।
प्रताप मल्लको शासनकालमा पहिलो पटक कश्मीरी मुसलमान नेपाल भित्रिएको इतिहासविद्को दाबी छ । प्रताप मल्लकै पालामा कश्मीरी सुफी सन्त र सोही सेरोफेरोमा मिस्किन बाबा काठमाडौं प्रवेश गरेको देखिन्छ । मिस्किन बाबा तिनै व्यक्ति हुन् जसले जयप्रकाश मल्लको पालामा घन्टाघरनेरको कश्मीरी ताकिया मस्जिद बनाए भन्ने विश्वास छ । कश्मीरी मुसलवान (मुसलमान) को अध्ययन गर्ने जानकारका अनुसार कश्मीरी मुसलवान काठमाडौं उपत्यकामा कुन–कुन स्थानमा कति संख्यामा थिए र उनीहरू कुन–कुन व्यवसायमा संग्लन थिए भन्ने आधिकारिक विवरण छैन । तर यो जनगणना लेखोटले नभेटिएको इतिहासको यो तथ्यलाई पनि उजागर गरेको छ ।
त्यतिबेलाको पाटनमा परम्परागत औषधिउपचारको प्रणाली बलियो रहेको देखिन्छ । २५ टोलमा मात्रै ४२ वटा वैद्यको पसल रहेका थिए । अधिकांश वैद्यपसलको सञ्चालक नेवार समुदायको देखिन्छ । जस्तो कि सौगलटोलमा मात्रै तीन वैद्यको पसल रहेको देखिन्छ जसमा यामुलका मानवीर श्रेष्ठ, ईखालखुका गोपाल श्रेष्ठ र सिंहताफलका भाजुधन वैद्यको औषधिमुलो पसल रहेको देखिन्छ ।
९८ वटा धारा रहेको पाटनमा पानीको मुख्य स्रोत भने इनार रहेको देखिन्छ । लेखोटमा पाटनका २५ टोलमा २ सय १० वटा इनार रहेको देखिन्छ । त्यस्तै ५० वटा साना–ठूला पोखरी रहेको पाटनमा ७ सय ४५ वटा त देवालय, ६१ वटा सत्तल र २ सय २७ वटा पाटी रहेको देखिन्छ । लिखोटमा पाटनका सबै अर्थात् २५ टोलमै रहेको मठमन्दिर र देवालयको छुट्टाछुट्टै विवरण समेटिएको छ ।
उबेला काठमाडौं र आसपास
विसं १९११ मा तयार पारिएको अर्को लेखोट हो— काठमाडौं पाटन पूर्व, पश्चिमसमेतका जिल्ला वा घर जहानको विवरण । लेखोटको अग्रभागमा लेखिएको छ— टुकुचा पश्चिम वाग्मती उत्तर, विष्णुमती पूर्व, ठमेल चौकी सडक, दक्षिण सहर काठमाडौं, टोल–टोल र बाहिरफेरको घरजहान जाँच मार्फत कप्तान सतराम खत्री, सुवेदार जगतबहादुर खत्री, बमोजिम तपसिल संवत् १९११ साल जेठ २ मा तयार पारिएको ।
थिमी र पाटनजस्तो मिहिन विवरण नसमेटिएको यस लेखोटमा मुख्यत: घर संख्या, जम्मा जहान, लोग्ने र स्वास्नीको संख्या समेटिएको छ । तत्कालीन जिल्लाहरू काठमाडौं, भादगाउँ, सल्यान धादिङ, गोर्खा, गोर्खा मजुवा, जिल्लै तनहुँ, लमजुङ, ढोर, भीरकोट, गह्रौं, पल्लो नुवाकोट, पर्वत, निसाभुजी, गल्कोट, मुसीकोट, इस्मा, धुर्कोट, पाटन, चिसंखु, सतङ, पैयु, ऋषिङ, धिरिङ, दाङ सल्यान, सल्यान, सल्याना सात थपौंला, प्यूठान, पाल्पा, पाल्पा वाकुम पूर्व, पाल्पा वाकुम पश्चिम, अर्घा, खाँची र गल्कोटको जनसंख्या विवरण समेटिएको छ ।
काठमाडौंभित्रका केही स्थानको भने जनसंख्या अलावा मठ मन्दिर, देवालय र सत्तल विवरण पनि समेटिएको छ । कतिसम्म भने यस लिखोटमा स्वयम्भू र देउपाटन भनिने चिनिने पशुपति क्षेत्रवरपर संवत् १९१३ मा हैजा लागेर मर्नेहरूको विवरण पनि समेटिएको छ । लेखोटका अनुसार उक्त वर्ष स्वयम्भूमा ७ जना र स्वयम्भूवरपर टोलमा ३ जना हैजाले मरेका थिए । त्यस्तै देउपाटनको चाबहिल क्षेत्रमा सोही साल हैजाले १ बूढा, २ तन्नेरी, २ केटा, १ तरुनी र १ केटीसहित सात जना मरेको तथ्य लेखोटमा छ । लेखोटमा देउपाट क्षेत्रको विटोल, गुनाटोल, लगनलांछी, भंकुटोल, नवाली र खना टोलमा हैजा लागेर मर्नेको नामसहितको विवरण समेटिएको छ ।
यो तथ्यले तत्कालीन नेपाल भनिने उपत्यकामा पनि सरसफाइको हालत कस्तो थियो र स्वास्थ्यमा पहुँच कति कमजोर थियो भन्ने बुझाउँछ ।
अन्वेषक जगदीशचन्द्र रेग्मीले आफूसँग रहेको ऐतिहासिक अभिलेखको संरक्षणका निम्ति के मात्रै गरेनन् ? कहाँ–कहाँ मात्रै धाएनन् । २०६२ माघमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयलाई पत्र लेख्दै तथ्यांक विभागसँग १९६८ पछिको मात्रै जनगणना संकलनमा रहेको उल्लेख गरेको छ । २०४८ मा प्रकाशित फस्ट सेन्सस अफ नेपाल नामक जर्नलमा जगदीशले आफूसँग भएको जनगणनाको तथ्यांकमा आधारित लेख लेखेका छन् ।
सम्बन्धित शाखाका अधिकृत, विशेषज्ञसहितको बैठकमा रेग्मीले आफूसँग भएको सामग्री प्रस्तुत गरेका रहेछन् । तथ्यांक विभागले उक्त सामग्री नि:सन्देह ऐतिहासिक एवं तथ्यांकीय शोधका लागि अत्यन्त उपयोगी भएकाले संरक्षण गर्नुपर्ने तथ्य योजना आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
रेग्मीले उक्त ऐतिहासिक अभिलेख बोकेर २०६२ सालमा पनि फेरि तथ्यांक विभाग धाए । २०६२ माघ १४ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तुङ्ग बास्तोलासहित १७ जनसंख्याविद्को उपस्थितिमा उक्त अभिलेखबारे छलफल आयोजना गरिएको रहेछ । एक समय त तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नै उनको घर आएका थिए । अभिलेखको संरक्षण गर्ने वाचा पनि गरे तर समयसँगै आफ्ना वाचा भुलेर उनी हराइगए ।
आफूसँग भएको ऐतिहासिक सामग्रीको संरक्षण र उपयोग होस् भन्ने हुटहुटीले उनले २०५८ सालतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या विभागका प्रमुख बालकुमार केसीलाई भेटे । तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रको शिक्षक रहेका उनको दरबारसँग राम्रो चिनाजानी थियो । आफूसँग भएको लेखोटको खबर दरबारसम्म पुर्‍याएन सके दरबारले नै सरंक्षणमा चासो देखाउँथ्यो कि भन्ने रेग्मीको आशा थियो । भेटमा केसीले लेखोटबारेको कुरा दरबारमा जाहेर गरिदिने आश्वासन दिए । तर, लगत्तै दरबार हत्याकाण्ड भएपछि त्यो कुरा पनि
त्यतिकै सेलायो ।
रेग्मी आफूसँग भएको अभिलेख बोकेर तत्कालीन राजसभा सदस्य जितबहादुर मानन्धरकहाँ पनि पुगे । मानन्धरले अभिलेखबारे कुरा गर्न भन्दै तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रका एक सहयोगीसँग भेट गर्ने व्यवस्था मिलाइदिए । तर, दरबार हत्याकाण्ड भएपछि त्यताबाट पनि केही कुरा अघि बढेन ।
भादगाउँमै जन्मेहुर्केका सम्पदाकर्मी रवीन्द्र पुरी यो लेखोटको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको भादगाउँ क्षेत्रबाट कति मूर्ति हराए र कति सम्पदा नासिए भनेर यकिन तथ्यांक खोज्न सघाउ पुग्नु हो । उनले अभिलेखमा जनाइएको मन्दिरको संख्या र अहिले आफ्नो टोलमा भएको मन्दिरको संख्या करिबन मिलेको बताए । ‘यो अभिलेख सम्पदाको आधिकारिक तथ्यांक मात्रै होइन,’ उनले भने, ‘यो लेखोटका आधारमा त्यतिबेलाका नेवार जातिभित्रका थरहरूको विवरण जान्न र कति थर हराए वा तिनको अपभ्रंस भयो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।’ यति बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्रीको राज्यले गरेको अपमान देखेर उदेक मानेका पुरीले भने, ‘इतिहासको खोजी, सम्पदाको संरक्षणमा राज्यको भूमिका जान्न धेरै पर जानै पर्दैन, भूकम्प गएको तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि राज्यले ऐतिहासिक महत्त्वको सिंहदरबारलाई कसरी वर्षा यामहरूमा भिज्न दियो भन्ने तथ्य हेरे पुग्छ ।’
एक समय भार्वाचो बस्ने इतिहास र संस्कृतिका अध्येता पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ जंगबहादुरकालीन जनगणनाको विवरणमा आफ्नै टोलका पुर्खाको नाम समेटिएको सुनेर पुलकित भए । उनले उत्साहित हुँदै भने, ‘यस्तो दस्ताबेजले त्यतिबेलाका समाज र संस्कृतिको जीवन्त चित्र बताउँछ ।’ १९६८ अघि जनगणना नै भएको थिए भनेर आफ्नै अडानमा अडिग रहनु र आफूकहाँ आइपुगेको जनगणनाको प्रामाणिक इतिहासलाई बेवास्ता गर्नु तथ्यांक विभागकै निम्ति लाजमर्दो कुरा त हो नै, जनगणनाका आधारमा डेढ सय वर्षभन्दा अघिको नेपाली समाजको बारेमा खोज गर्न रुचि राख्नेलाई, तत्कालीन समाज र अहिलको समाजबारे तुलनात्मक अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई गुमराहमा राख्ने संकीर्ण सोच हो । पुरुषोत्तमका अनुसार सरकारी निकायले बहुमूल्य ऐतिहासिक खजाना जोगाउन चासो र चिन्ता नदेखाउनु लाजमर्दो कुरा हो । उनले भने, ‘हामीजस्तो इतिहास र संस्कृतिको खोजबिन गर्नेका सरकारी ढर्रा बहुतै चिन्ताको विषय हो ।’
यसरी हात पर्‍यो
भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट पीएचडी सकेर फर्केलगत्तै रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन संस्थानमा अस्थायी नियुक्तिमा काम सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला इतिहासबारे अध्ययन गरिरहेका धनबज्र बर्जाचार्य पनि त्यहीं थिए । रेग्मीका अनुसार धनबज्र पुराना सामग्रीहरूको संकलन गर्थे । एक जना तामाङ केटा अनेकन पुराना लेखोट कहाँ कहाँबाट खोजेर उनीकहाँ ल्याएर दिन्थे । धनब्रज केही पैसा दिएर ती सामान किन्थे । एक दिन त्यही तामाङ केटाले नेपाली कागजमा हातले लेखिएका तीन थान पुस्तक ल्याएर रेग्मीकहाँ आए । रेग्मीले तिनलाई किने । ।
त्यो सामग्री हात पारेपछि रेग्मीको इतिहासप्रतिको रुचि बढ्दै गयो । रेग्मीले २०४८ मा एक जर्नलमा यस हस्तलिखित अभिलेखको महत्त्वबारे लेख छपाएका थिए । तर, थोरै प्रति छापिने भएकाले हो कि त्यसमा धेरैको नजर परेन । ऐतिहासिक महत्त्वको यो सामग्रीलाई प्रकाशन गर्न पाए वा राज्यको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई नभएको होइन । तर, छाप्ने रकम अभावमा उनले किताबको प्रकाशन गर्ने आँट गरेनन् ।
यतिबेला उनको आशा केही गर्छु भनेर लागेका स्थिर सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि छ । उनले भने, ‘यो लेखोटको महत्त्व प्रधानमन्त्रीलाई थाहा दिन पाए उनैले पो संरक्षणको चासो देखाउँथे कि ?’
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:२५
मन्त्री अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण खराब मौसम : आयोग
विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभामा
मानवाधिकार आयोग अध्यक्षप्रति नेम्वाङको असन्तुष्टि
‘ग्रिनहाउस’ मा औपचारिक रुपमा सरे उपराष्ट्रपति
वृद्ध वडाध्यक्ष बैठकबाट रुँदै निस्किएपछि...
गैरकानुनी रुपमा जग्गा कब्जा गरेर बनाएको भवनको निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र खोज्दै कृष्णदास महाराज